Juventus oo ku wargalisay kooxaha Manchester United iyo Bayern Munich qiimaha ay ku iibineyso Paulo Dybala – Gool FM
Juventus oo ku wargalisay kooxaha Manchester United iyo Bayern Munich qiimaha ay ku iibineyso Paulo Dybala
(Yurub) 10 Maajo 2019. Sida ay shaaca ka qaaday warbaahinta gudaha dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa go’aamisay qiimaha ay ku iibineyso weeraryahankeeda Paulo Dybala, kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda.
Weeraryahanka heerka caalami dalka Argentina ee Paulo Dybala ayaa lala xiriirinayay in midkood uu u dhaqaaqi doono kooxaha Manchester United iyo Bayern Munich xagaagan, kaddib markii uu sheegay inuu doonayo ka tagista kooxda lagu naaneyso The Old Lady.
25 jirka reer Argantina ayaa xili ciyaareed xun ku soo qaatay kooxda Juventus xili ciyaareedkan, sababa la xiriira in boos joogta ah uusan ka heysan shaxda tababare Massimiliano Allegri, maadaama uu kooxda joogo Cristiano Ronaldo iyo weeraryahano kale ee aad u badan.
Si kastaba ha ahaatee, Paulo Dybala, ayaa weli ka mid ah weeraryahanada ugu fiican Yurub, sidaasi darteed kooxda Bayern Munich ayaa muujisay sida xoogan ay u daneeneyso inay gacanta ku dhigto adeegiisa, waxaana sidoo kale loolanka kula jirta Manchester United.
Hadaba war-sidaha “CalcioMercato” ayaa shaaca ka qaaday in Juventus aysan weli helin dalabyo rasmi ah ee ku saabsan adeega Paulo Dybala, laakiin guddiga kooxda ayaa waxay sii go’aamiyeen qiimaha lagu iibin karo xagaagan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in kooxda Juventus ay weydiisan doonto in ka badan 100 milyan euro si ay u go’aansato iibinta Paulo Dybala xagaagan.
Yaya Toure oo isaga fariistay kubbada cagta
Kooxaha Barcelona iyo Inter Milan oo qarka u saaran inay ku heshiiyaan saxiixa Ivan Rakitić